Boliska Uganda oo loo keenay Gawaari Gaashaaman oo ay u adeegsadaan Ammaanka iyo Doorashadda Madaxtinimadda – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Boliska Uganda oo loo keenay Gawaari Gaashaaman oo ay u adeegsadaan Ammaanka iyo Doorashadda Madaxtinimadda
Dekedda magaallaadda Mombasa ee dalka Kenya waxaa soo gaaray Markab wada Labaatameeyo Gaadiidka Gaashaman oo u muuqaal eg Gawaarida Gaashaaman ee Boliska Kenya isbuucii hore loo keenay.
Wargeyska The Star oo soo bandhigay Muuqaaladda Gaadiidkaasi loo wado Boliska Uganda ayaa qoray inay Gaadiidkaasi isugu jiraan Gawaarida Gaashaaman, kuwa loogu hortago Dibadbadayaasha, kuwa Booyadlaha ee laga tuuro Biyaha lagu kala cayriyo Dibadbaxayaasha iyo gadiidka loogu talagalay in lagu xaaqo waxyaabaha Jidadka lagu xiro.
Ilo-wareedyo ayaa waxay sheegayaan in Gaadiidka Gaashaaman ee Boliska Uganda uga soo degay Dekedda Mombasa loogu talagalay in lagu sugo Ammaanka Doorashadda Guud ee Uganda oo dhici doonta bishan February 18-da.
Qunsulka Guudee Uganda u jooga Kenya, Tayebwe Katureebe oo wax laga weydiiyey Gaadiidkaasi ayaa sheegay inusan wax war ah ka hayin arrinkaasi.
“Kuma baraarugsani arrinta Gaadiidka Boliska ee yaalla Dekedda, balse haddii ay halkaasi yaallaan ma aha micnaha in loogu talagalay Doorashooyinka” ayuu yiri Diplomaasigaasi oo u waramay Wargeyska The Star.
Tayebwe Katureebe waxa uusan meesha ka saarin in Gaadiidkaasi loo adeegsanayo La-dagaalanka Alshabaab, isagoo sheegay inay Uganda muddo dheer dagaal kula jireen Alshabaab, tan iyo markii ay Ciiddanka Uganda tageen Somalia, kuna biireen Hawlgalka AMISOM sannadkii 2007-dii.
Dhinaca kale, Doorashadda Madaxtinimadda ee dalka Uganda, waxa uu Madaxweyne Yoweeri Museveni doonayaa inuu sii kororsado Madaxtinimadiisa 30-ka sanno ee uu hayey Hoggaanka Uganda, inkastoo ay xilkaasi kula loolamayaan Hoggaamiyaha Mucaardka, Kizza Besigye iyo A mama Mbaabazi.
Kooxaha Xuquuqda Aadanaha waxay ku eedeeyeen Dowladda Uganda inay u adeegsadaan Ammaanka Qraanka, si ay ku caburiyaan Kooxaha sida kulul u naqdiya Madaxweyne Museveni.
SAWIRO: Muuqaalo cusub oo muujinaya Bistooladdii Dahabka ee Kolonel Qadaafi.
(LA-YAABKA IYO SAWIRO): Haramacad figta sare ee Geedka la koray Baciid si ay u feentaan.